यौन जिज्ञासा र समाधान Archives |
Tag: यौन जिज्ञासा र समाधान
२०७५, १५ भाद्र शुक्रबार १५:४६ August 31, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
म १८ वर्षीया विवाहित युवती हुँ। भनिन्छ, जब एक भर्जिन युवतीले पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्छिन्, रगत आउँछ, जुन कुमारित्वको संकेत वा प्रमाण हो, तर मेरो रगत आएन। यो कसरी हुन्छ ? कसलाई यस्तो हुन्छ र कसलाई हुँदैन ? विशेष गरेर…
छोरी मान्छेले दिनहुँ हस्तमैथुन गर्दा के–कस्तो असर पर्छ ?
२०७५, १४ भाद्र बिहीबार २२:०६ August 30, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी : हाम्रो समाजका धेरैजसो मानिसले महिलाहरू हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने मान्छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । महिलाहरूले पनि हस्तमैथुन गर्छन् । एक अध्ययनअनुसार ८२ प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गरेको अनुभव भएको बताएका छन् । महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्छन् ? योनिलाई नै महिलाको…
२०७५, ७ जेष्ठ सोमबार २१:२३ May 21, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
प्रतिकात्मक फोटो म १८ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ। मलाई धेरै नै यौन इच्छा हुन्छ, तर म केटा साथीहरूसँग सम्पर्क राख्न चाहन्नँ। यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्ला ? यौनइच्छा किन ? यौनइच्छा जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। प्राकृतिक रूपमा सबै स्वस्थ व्यक्तिमा…
एजेन्सी । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक रुपमा विभिन्न समस्याहरु निम्तिएका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । श्रीमान विदेशमा रहेको मौकामा महिलाहरु परपुरुषसँग लागेका थुप्रै घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । आखिर किन महिलाहरु अरुका श्रीमानलाई ताक्छन् अर्थात परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम…
म २५ वर्षीया विवाहित महिला हुँ ! श्रीमान ओठ निकै बेर चुस्नुहुन्छ, किन यसो गर्नुभएको होला ?
२०७५, २७ बैशाख बिहीबार २२:५२ May 10, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
म २५ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । हाम्रो विवाह भएको एक वर्ष भयो । श्रीमान्ले सहवासका बेला ओठ, जिब्रो तथा शरिरका विभिन्न भागमा चुम्बन गर्नुहुन्छ । ओठ निकै बेर चुस्नुहुन्छ । चुम्बनमा बढी नै समय बिताउनुहुन्छ । उहाँले किन यसो…
श्रीमानसँग नियमित यौनसम्पर्क हुँदा गर्भमा बच्चा बसेन ! म के गरौ ?
२०७५, २७ बैशाख बिहीबार २२:४७ May 10, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
म २२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो विवाह भएको ३ वर्ष भयो । मेरो श्रीमान्को उमेर २८ वर्ष छ । विवाहदेखि नै हामीबीच असुरक्षित यौनसम्पर्क हुँदै आए पनि श्रीमान्ले वीर्य बाहिर फ्याँक्नुहुन्थ्यो । गत वैशाखदेखि हामीले बच्चा पाउने रहरले…
डा. राजेन्द्र भद्रा, यौन जिज्ञासा र समाधान
म २६ वर्षीया विवाहित महिला हुँ ! मेरो अत्यधिक योनिरस किन आएको होला ?
२०७५, २६ बैशाख बुधबार २२:४८ May 9, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
म २६ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो विवाह भएको तीन वर्ष भयो र हाम्रो साथमा २ वर्षीया छोरी छिन् । श्रीमान् ६ महिना वर्षदिनको फरकमा घर आउनुहुन्छ । यौन सम्पर्क गर्दा लगभग ३० देखि ४५ मिनेट घंर्षण गर्नुहुन्छ ।…
म २२ वर्षीय अविवाहित युवती हुँ। केही दिनअघि एउटा केटासँग यौनसम्पर्क भयो। मेरो समस्या के हो भने जब मेरो साथीसँग सम्पर्क भयो त्यो दिनदेखि तल्लो पेट दुखिरहेको छ। किन होला ? हामीले कुनै साधन पनि प्रयोग गरेका थिएनौं। त्यस दिन…
दुई बर्ष भयो ,मेरो बुढाले एक पटक पनि यौनसम्पर्क गरेको छैन, म के गरौ ?
२०७५, २५ बैशाख मंगलवार २०:२४ May 8, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
म एक सन्तानकी आमा हुँ । लगभग दुई वर्ष भयो, मैले आफ्नो श्रीमान्सँग यौनसम्पर्क नराखेको । अर्को एक पुरुषसँग माया बसेकाले दुवै जनाको सहमतिमा करिब १५ महिना लगातार यौन सम्पर्क राख्यौँ र दुई महिनापहिले ऊ पनि वैदेशिक रोजगारीमा गयो ।…
श्रीमानलाई यौन सन्तुष्टि दिन योनी टाइट पार्ने उपाय !
२०७५, २४ बैशाख सोमबार २२:५८ May 7, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
म २५ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो तीन वर्षको बच्चा छ । मेरा श्रीमान् मसँग यौन सम्पर्क गर्दा मजा आउँदैन भन्नुहुन्छ । मेरो योनी टाइट छैन भन्दै झर्किने गर्नुहुन्छ । यसले गर्दा हाम्रो पारिवारिक जीवनमा नै दरार आउलाजस्तो भइसक्यो…